Eyona Nkonzo yeLumenis M22 kunye noMthengisi | Hongyu
I-M22 ™ Modular Aesthetic Laser Platform yezicelo ezininzi
I-M22 ™ liqonga elinemodyuli yezicelo ezininzi kunyango lweemeko ezingaphezulu kwama-30 zolusu kunye nokususwa kweenwele.
Isetyenziswa ngoogqirha kwihlabathi liphela, i-M22 ™ ikwenza ukuba unyange iintlobo ngeentlobo zezigulana kunye neemeko ezineziphumo ezigqwesileyo.
I-4 yeeTekhnoloji ezininzi kwiNkqubo eNye yeemodyuli
I-M22 ™ ikhula ngokuziqhelanisa
Ukwanda kwiimfuno zakho zonyango kwaye uvumelanise nezicelo ezizayo njengoko zivela.
IPL yendalo iphela
Itekhnoloji yokuTsala efanelekileyo (OPT ™)
Isandla esinye nesineefilitha eziguqukayo kunye nezikhanyisi
Unyango lwe-IPL lolusu usebenzisa i-photorejuvenation
Elona qhezu lokwenyani elingasusiyo, kunye nesikena seCoolScan
Ukuvela kwakhona kolusu
Inguqulelo ye-M22 yeprimiyamu ene-AOPT ngoku iyafumaneka e-China!
I-M22 ™ ye-IPL yeHlabathi ngoku idityaniswe ne-AOPT, ivumela ulawulo olupheleleyo kubasebenzisi abaphambili, isenza ukuba kube lula ukulungelelanisa useto lwesigulana ngasinye kunye nemeko nganye. Yenza elona thuba lilungileyo lokusebenzisa ukubetha kwentliziyo kwaye ngokulula unike iziphumo ezingagungqiyo nezomeleleyo kwizigulana zakho!
Ngoyilo lomgca wegolide, uLumenis ngokuzingca uzisa ingxelo ye-M22 yeprimiyamu, echanekileyo, ekhuselekileyo, kunye nokhanyiso olusebenzayo kunye nonyango olusekwe kwimarike yezonyango.
Imodyuli ye-IPL ye-M22 ™ ikuvumela ukuba uphathe iimeko ezininzi ezininzi ngesandla esinye, esinezinto ezininzi.
Isixhobo se-IPL se-Universal siyilelwe nge-9 ExpertFilters ™ eyenzelwe imeko yokuphathwa kunye nokuqwalaselwa kwesihluzi esinikwe ikhompyuter kukhuseleko oluphuculweyo kunye nokusetyenziswa ngokulula. Ngokutshintsha kwesandla se-IPL i-ExpertFilters ™ ngemizuzwana endaweni yokufaka into entsha.
Isixhobo se-IPL se-Universal asigcini nje ixesha lokunyanga kunye nendawo yokugcina, kodwa sikwabiza kakhulu ngenxa yokuba akukho mfuneko yokuthenga izinto zobuchwephetsha ze-IPL. Zintathu ii-SapphireCool ™ zokukhanyisa, zemimandla emikhulu kunye nencinci, ukwandisa isigulana ngokuthuthuzelwa kokupholisa okuqhubekayo.
Nd: I-YAG Laser eneTekhnoloji yokuLanda ngokuPhindayo izihlandlo ezininzi
Nd: Imodyuli yeYAG yeM22 ™ ibonelela ngonyango lweetelangiectasias, hemangiomas, imithambo yemilenze nemibimbi yobuso. Unyango oluchanekileyo nolutofotofo olunama-4 apholileyo kwaye atshintshe ngokulula ukukhanya. Ukuphindaphindwa kokuLandelelana ngokulandelelana, okufumaneka kuzo zombini iimodyuli ze-Nd: YAG kunye ne-IPL kwi-M22 ™, kwenza ukupholisa phakathi kokulandelelana kweempuphu, ukukhusela i-epidermis ngelixa uvumela ukusetyenziswa okukhuselekileyo kokuhamba okuphezulu. Oku kunika unyango kuzo zonke iintlobo zolusu, kubandakanya ulusu olumnyama, kwaye kunciphisa ithuba leziphumo ebezingalindelekanga kunyango lwesilonda semithambo.
Amandla okukhanya ahanjiswa ngexesha lokuhamba, kwaye izicubu ziyaphola ngexesha lokulibaziseka. Amandla amaninzi aziswa ngokukhuselekileyo kwithagethi.
Ukuphindaphinda okulandelelanayo okuphindaphindiweyo kuvumela ukupholisa phakathi kweempompo ukususa ngokukhuselekileyo iinwele kuzo zonke iintlobo zolusu kubandakanya ulusu olumnyama kwaye kunciphise ithuba lokonakaliswa kolusu kunyango lwesilonda semithambo.
I-ResurFX ™ Imodyuli ye-ResurFX ™ ye-M22 ™ kuphela kobuchwephesha bokwenyani obungebobomi. Ukupasa kube yinto enye efunekayo.
Ngokungafaniyo nezinye iitekhnoloji zeqhekeza, iResurFX ™ ifuna ukupasa kube kanye kuphela ukuze isebenze, ukugcina ixesha kunye nokukhusela ulusu lwesigulana.
I-ResurFX ™ isebenzisa i-1565 nm fiber laser kunye neskena esihambele phambili, esenza ukuba ukhethe kwizinto ezingaphezu kwama-600 zokudityaniswa kwemilo, ubungakanani kunye nokuxinana kunyango olufanelekileyo.
I-ResurFX ™ kunye neCoolScan ™ yoNyango ngokugqibeleleyo
Imodyuli yeRururFX ™ ineskena se-state-of-art se-CoolScan ™ sokuskena okungalandelelaniyo. I-patent ilinde i-algorithm ibeka indawo nganye yeqhekeza ngendlela elawulwayo ukukhusela izicubu ekufumaneni ubushushu kunye nobushushu. Obu buchule bukhethekile kwi-ResurFX ™ 1565nm fiber laser. Isixhobo seResurFX ™ sixhotyiswe kukuphola okungagungqiyo koqhakamshelwano, ukwandisa intuthuzelo yesigulana ngexesha lonyango.
Egqithileyo IHydraFacial MD